Damee fayyaatiin karoora bara 2030 milkeessuuf
Damee fayyaatiin karoora bara 2030 milkeessuuf Featured
Itoophiyaan dhimmoota bara 2030tti damee fayyaatiin galmaan gahuf akka Addunyaatti karoorfaman kanneen akka tamsa'ina dhibee HIV Eedsiifi Sombaa(TB) ittisuuf akkasumas dhibee Busaa balleessuudhaaf karoorfattee hojjechaa akka jirtu beekamaadha.
Dhibeewwan sadeen ibsaman kanneen ittisuudhaaf immoo wayitii ammaa dhaabbileen miti mootummaas ta'e biyyootni Addunyaa hundi irree tokkoon hojjechuurratti kan argaman ta'uu ragaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa ni mul'isa.
Sochii olaanaa qaamota garaa garaa hirmaachisuudhaan waggoottan kurnan darban keessatti hojjatamaa tureenis bu'aawwaniifi jijjiiramootni galmaa'aa jiran hedduudha.
Akka Itoophiyaattis, lammiileen dhibee HIV Eedsii waliin jiraatan kuma 700fi kuma 22 yemmuu ta'an, biyyattii keessatti dhibeewwan du'a lammiilee hedduutiif sababa ta'an keessaayis sadarkaa 2fa irratti kan argamu ta'uu ragaalee Ministeera Fayyaa RFDI irraa hubatameera.
Gama biraatiinis biyyattiin baay'ina namoota dhibee Sombaatiin qabamaniin Addunyaa irraa sadarkaa 9fa kan argamtu yemmuu taatu, biyyoota 30 dhibeen kun dawaadhaan walbare keessatti kan argamtuudha.
Dhibeen busaas dhibeewwan yeroo ammaa fayyaa hawaasa biyyattii qoraa jiran keessatti kan ramadamuufi waggaa waggaadhaan lammiileen biyyattii miiliyoona 2 ta'an dhibee busaatiin kan qabamaniidha.
Dhibeewwan kanneen to'achuudhaaf immoo gargaarsi dhaabbileefi biyyoota Aaddunyaa akkuma jirutti ta'ee, biyyattiinis bajeta olaanaa ramaduudhaan sochii olaanaa taasisaa jiraachuu Ministeerri Fayyaa ibsuurratti argama.
Tibbanuma immoo 'Dhaabbanni Global Fund' jedhamu maallaqa ittisaafi to'annoo HIV Eedsii, Busaafi Sombaatiif oolu doolaara mil. 379 kennuunsaa sochii to'annoo dhibeewwan kanneen irratti taasifamuuf tumsa ta'uusaa de'eetaan ministerichaa Doktar Kabbadaa Warquu ni dubbatu.
Akka Doktar Kabbadaan ibsanitti, yaalii yeroo dheeraa taasifamaa tureen maallaqichi kan argame yoo ta'u, kanaafis milkaa'inni biyyattiin damee fayyaa irratti galmeessisaa turte shoora olaanaa kan qabu ta'uusaati.
Maallaqa deggarsaan argame keessaa doolaarri miiliyoona 194 ittisaafi to'annoo dhibee HIV Eedsiif, miiliyoonni 46 dhibee Sombaatiif kan oolu yoo ta'u, doolaarri miiliyoona 112 immoo dhibee busaatiif akkasumas miiliyoona 27 ta'u immoo hojmaata fayyaa cimaa ta'e diriirsuudhaaf kan ooluudha, jedhu.
Itoophiyaan deggarsa biyyootaafi dhaabbilee garaa garaa irraa argachaa turte bifa guutuu ta'een hojirra oolchuusheetiin du'a haadholiifi daa'immanii hir'isuu danda'uushee kan eeran Doktar Kabbadaan, tamsa'ina dhibee HIV Eedsiifi du'a namoota dhibee kana waliin jiraataniis hir'isuun kan danda'ame ta'uu dubbatu.
Yeroo ammaa kanas namootni dhibee HIV Eedsii waliin jiraatan kuma 430 ta'aniif wal'aansi lammiilee HIV Eedsiin qabamamaniif taasifamaa jiraachuu himanii, kanaanis namoota sababa dhibee kanaatiin lubbuusaanii dhabaa turan dhibbantaa 70n hir'isuun kan danda'ameera.
Sochii ittisaafi to'annoo dhibeewwan kanniin irratti taasifameenis namoota dhibee Busaatiin lubbuusaanii dhabaa turan dhibbantaa 80n akkasumas kanneen sababa dhibee Sombaatiin du'an immoo dhibbantaa 36n hir'isuun akka danda'amellee ni eeru.
Itoophiyaan biyyoota gargaarsa dhaabbata 'Global Fund' irraa argatan keessaa ishee tokko yemmuu taatu, bara 2002 hanga 2017 qofatti doolaara biiliyoona lama ol argatteetti.
Walumaagalatti, gama damee fayyaa Addunyaatiin maniiwwan bara 2030f karoorfaman galmaan ga'uudhaafis ta'e hojmaata fayyaa cimaa ta'e diriirsuudhaaf maallaqni gargaarsaan argame kun ga'ee olaanaa kan qabaatu ta'us, sochiifi kutannoon mootummaan fayyaa hawaasasaa mirkaneessuudhaaf taasisus xiyyeeffatamuu qaba.
Torban kana/This_Week 12421
Guyyaa mara/All_Days 1821841